Kugadziridza kweziso - Shanghai Bohua Security Equipment Co, Ltd.
Vatengi vanogona gadzira yakagadziriswa eyewash michina zvinoenderana akasiyana mashandisiro zvinodiwa, senge mvura tangi eyewash, yakadzika midzi yekugezera musoro eyewash, yemagetsi eyewash, isina simbi fenzi eyewash, nharembozha eyewash, nezvimwe.
Semuenzaniso, marabhoritari emayunivhesiti, marabhoritari ezvipatara nedzimwe nzvimbo diki dzinowanzoda kuwachirwa kana kushambidzwa maziso eziso kudzikisa tsoka tsoka uye kufambisa mashandiro evashandi.
Iyo inokodzera kumisikidza yemubatanidzwa eyewash mukemikari kamuri, iyo inoumbwa neyeyewash mudziyo uye mudziyo wechipfira, uye inoiswa zvakananga pasi kuti ishandiswe. Kana zvinhu zvemakemikari zvichimwayiwa pazvipfeko kana mumuviri wevashandi, iyo yekumwaya system yemubatanidzwa weziso rinogona kushambidzwa; kana zvinhu zvinokuvadza zvichimwayiwa pameso evashandi, kumeso, mutsipa kana maoko, inogona kushandiswa Iyo yekuwachisa system yekomboni eyewash inoshambidzwa. Sarudza iyo yakakodzera mhando ye eyewash zvinoenderana neramangwana rebasa. Semuenzaniso, eyewash inotakurika inogona kushandiswa munzvimbo yekushandira ine matsime emvura asinganetsi. Chishandiso chemubati wekuwacha maziso chinogona kushandiswa mufekitori, iyo ine zvese zviri zviviri spray system uye eyewash system, iri nyore kwazvo kushandisa.
Kana yenzvimbo dzine mafashama emvura zvakanyanya kana nzvimbo dzekuvaka uko kunonetsa kuwana mvura nekuda kwekukanganisa nzvimbo, vatengi vedu vanowanzo gadzira yekuchenesa mvura, uye panguva imwechete inoda nguva yekuchengetedza mvura, mhando yemvura uye mamwe ma parameter kusangana zviyero.
Semuenzaniso, tichitarisa tembiricha uye mhando yemamiriro ekunze kuMiddle East, tinokurudzira kushandisa nhevedzano yemufiriji weziso remaziso, senge firiji yeziso; yemamiriro ekunze anotonhora zvakanyanya eAlaska kuNorth America, vatengi vanowanzo gadzira yakashisa eyewash kana antifreeze eyewash, kana paine Zvimwe zvezvimwe zvinodiwa, senge DCS system kana inodziya mvura kutenderera system, tinogona kugadzirisa zvigadzirwa zvinoenderana newe zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. .
Panguva imwecheteyo, tichitarisa akasiyana masikirwo uye mamiriro ekunze mune dzakasiyana nyika nematunhu, isu tinokwanisa kugadzirisa chaiwo emawashi washer zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vemuno.